बामदेवलाई भेट्न भैँसेपाटी पुगे ओली | Ratopati
बामदेवलाई भेट्न भैँसेपाटी पुगे ओली
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeसाउन १३, २०७७ chat_bubble_outline1
काठमाडौं । नेकपा भित्र विवाद चर्किरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई भेट्न पुगेका छन् । ओली भैँसेपाटीस्थित गौतमको निवासमा मंगलबार साँझ पुगेका हुन् ।
नेकपा भित्रको विवाद मिलाउने प्रयासस्वरुप गौतमले आजै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने सो प्रस्तावसँगै गौतम प्रधानमन्त्री ओलीको क्याम्पमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । पार्टी विग्रह तत्काल रोक्नका लागि भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसामु गौतमले ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
जसअनुसार गौतमले ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने प्रस्ताव गरेका छन् ।
पार्टीको विवाद मिलाउन बामदेवले राखे ६ बुँदे प्रस्ताव
यसैगरी पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सुझाव र परामर्शको आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्नुका साथै संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सचिवालयमा परामर्श लिने पनि गौतमको प्रस्ताव छ । यसबाहेक पार्टी बैठकहरु पार्टी कार्यालयमा मात्रै गर्ने पनि उनको प्रस्ताव छ ।
यद्यपि गौतमको प्रस्तावमाथि अहिलेसम्म कुनै छलफल सुरु भइनसकेको अवस्थामा ओली उनलाई भेट्न एकाएक पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार गौतमलाई विश्वासमा ल्याउने प्रयासमा ओली छन् ।
आजै बोलाइएको स्थायी समिति बैठक ओलीले स्थगित गरेका थिए भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै प्रचण्ड समूहले बैठकलाई निरन्तरता दिएको थियो । सो बैठकमा पनि गौतमले अध्यक्षद्वयको पदको लडाइँमा पर्न नचाहेको भन्दै आफू वैचारिक रुपमा सुदृढ नेकपाको पक्षमा रहेको बताएका थिए ।
ओली बिनाको स्थायी समिति बैठकले भने उनको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ ।
ओलीसँग वार्ता गर्न प्रचण्डलाई जिम्मेवारी, ओली बिनाको बैठकमा २९ स्थायी समिति सदस्य सहभागी
July 28, 2020, 9:20 p.m. Desbhakta Nepal
दुई तिहाईको बहुमत नेकपालाई किन पचेन ? प्रश्न गम्भीर छ। के यो परिस्थिति नेपाली नेताहरुकै स्वस्फुर्त मनस्थितिको उपज हो ? के नेकपाको यो बिबाद भित्र भारतीय थिंक टेन्कको कुनै प्रभाव छँदै छैन ? के दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार विश्वका साम्राज्यबादीहरुको हाइसन्चोको बिषय थियो ? के नेकपामा बिभाजन ल्याएर लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको बिषयलाई भारतले आफ्नो पक्षमा पार्न चाहेको होईन ? के भारतका बीजेपीका मिडियाले केपी ओलीको राजीनामा मागिरहेका छैनन् ? नेपाली मिडियाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजिनामा मागिरहेका छन् ? के नेपाली जनताले उनको राजिनामा मागेर ठुल्ठुला बिरोधका कार्यक्रम भईरहेका छन् देशमा? के सिंगो जीवन कम्युनिष्ट पार्टीका लागि समर्पण गरेका होनाहार युवा नेताहरु नेकपा फुटेको सहन गर्न सक्लान्? के पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपाबाट केपी ओलीलाई आउट गर्छु भनेर कसैलाई भन्नु भएको छैन? के सत्ता र कुर्सि भन्दा ठुलो कुरा संसारमा अरु केहि हुन्न ? के एक पटक प्रधानमन्त्री भैसके पछि त्यहाँ भन्दा माथि पुग्ने कुनै कार्यकारी पद छ नेपालमा? के देशभरिका १० लाख सङ्गठित सदस्यले पार्टी फुटोस भन्ने चाहेका छन्? केपी तिनीहरु ओलीलाई हटाउनु पर्छ भनेर काठमाडौँमा दबाब दिन आएका छन्? के दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सत्ता फुटे पछि फेरी गाउँमा गएर भोट माग्ने आँट कसैको छ? के भारतीय गुप्तचरहरुले केहि नेताहरुलाई कानेखुशी गरेकै छैनन् ? के बिगतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री कोहि कसैले लिम्पियाधुरा लिपुलेकको नक्सा सार्बजनिक गरेका थिए? के भारतले आफु अनुकुलको प्रधानमन्त्री बनाउन लाए अर्हाएको छैन ? के मध्यावधि चुनाव भएमा ५४ साल दोहोरिदैन ? माले को बन्छ कसलाई बनाउने भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा छैन? के पार्टी फुटेको खण्डमा अहिलेको गणितीय हिसाब ठ्याक्कै तपाईंहरुले सोचे जस्तो मिल्छ भन्ने छ ? यस्ता सयौं प्रश्नहरुको जवाफ दिन त्यति सजिलो छैन। नेताज्यूहरु मिल्नुहोस। मिल्नुहोस। मरेर जाँदा अहिले जति मलामी आउँछन्, पार्टी फुटे पछि ९० प्रतिसत मलामी घट्ने छन्। तपाईंहरुको पार्टीको स्थिति सिपि मैनाली, ५४ सालको मालेको जस्तै नै हुन्छ। मिल्नु भएन भने त्यो दिन अब धेरै टाढा छैन। यसर्थ मिल्नुहोस कमरेडहरु मिल्नुहोस। माधव नेपाल अझै २ पटक प्रधानमन्त्री बन्नु हुनेछ नेकपा रहेमा। प्रचण्ड ३ पटक अझै प्रधानमन्त्री बन्नु हुने छ नेकपा रहेमा। झलनाथ १ पटक प्रधानमन्त्री १ पटक राष्ट्रपति बन्नु हुने छ यहि नेकपा रहेमा। बामदेव २ पटक प्रधानमन्त्री बन्नु हुनेछ यो नेकपा रहेमा। बादल, जनार्दन शर्मा, भिम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई,मणी थापा सबैको पालो आउने छ। तर केपी ओली अब फेरी कहिलै प्रधानमन्त्री पनि बन्ने छैनन्, न अध्यक्ष नै यो त सत्य नि हो नि कि झुटो हो? उहाँको स्वास्थ्यले पनि त्यो दिंदैन। यसर्थ अब २ बर्ष पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै छोड्नुहोस् पार्टी बचाउन।दुनियाँको सामु मजाक नबन्न। तपाईंहरु सबैको पालो आउँछ एकदिन पार्टी रहेमा। यो सिंगो पार्टी नरहेमा यी सब केहि हुन्नन्। सबैको सपना हावामा उड्ने छ। आखिर कुर्सि नै त रहेछ सबथोक है ।